China Electronic Brinell Ukuqina Tester Ihowuliseyili HBE-3000A mveliso kunye nabenzi | UKAIRDA
I-Electronic Brinell Hardness Tester I-HBE-3000A
I-elektroniki yeBrinell Hardness Tester I-HBE-3000A isebenzisa uhlobo lwenzwa yesekethe eyongezwe ngenkqubo yolawulo iyasebenza ukulinganisa ixabiso lokuqina kwezinto ezinkulu zesinyithi, izinto ezingafakwanga isinyithi kunye ne-alloy, intsimbi eyahlukeneyo enoburharha, ukuqina kunye nokuqinisa intsimbi, ngakumbi isinyithi esithambileyo njenge-aluminium emsulwa , i-tin, njl.Imodeli yokucaciswa kwe-HBE-3000A iyonke amandla ovavanyo 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N, 2450N, 4900N, 7350N, 9800N, 14700N, 29400N Uluhlu lovavanyo lobunzima 8 - 650 HBW (ibhola yentsimbi yeHardmetals) Amp ...
I-Electronic Brinell Hardness Tester I-HBE-3000A isebenzisa isivamvo sohlobo lwesekethe esongezwe ngenkqubo yolawulo sisebenza ukulinganisa ixabiso lokuqina kwezinto ezinkulu zesinyithi zentsimbi, izinto ezingafakwanga isinyithi kunye ne-alloy, intsimbi eyahlukeneyo enobushushu, ukuqina kunye nokuqinisa intsimbi, ngokukodwa isinyithi esithambileyo njenge-aluminium emsulwa, itoti, njl.
Inani elipheleleyo lovavanyo 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N,
Uluhlu lokuQiniseka kovavanyo I-8 - 650 HBW (ibhola yentsimbi yehardmetals)
Ubuninzi bobude beSampuli Ngama-200 mm
Ubunzulu be-specimen 135mm
Ubungakanani beTester (L × W × H) 236 × 550 × 753mm
Ukunikezwa Amandla AC 220V 50 / 60Hz
Ukusinda okushiyekile 123KG
I-Spares kuLuhlu lokuPakisha
.52.5, φ5, φ10mm Ibhola yangaphakathi yentsimbi 1
Iitafile zokuvavanya (ezinkulu, ezincinci "V") 1
Ukuqina Tester Udidi
• Iindidi zokuvavanya
• Umvavanyi wokuqina kweLeeb
• Brinell yobulukhuni Tester
• Rockwell yobulukhuni Tester
• Vickers yobulukhuni Tester
• Ixesha ledolophu
Ukuqina Tester Ulondolozo
Ukongeza kwizikhuselo ezikhethekileyo ekusebenziseni iidurometer ezahlukeneyo, abavavanyi bokuqina, kukho imiba eqhelekileyo ekufuneka iqatshelwe, edweliswe ngolu hlobo lulandelayo:
1. Iimpazamo zobulukhuni: enye yempazamo ebangelwe kukushenxiswa kunye nentshukumo yemodeli yokulinganisa; Enye ebangelwa lukhuni parameter ngaphandle komgangatho ebekiweyo. Kwimpazamo yesibini, ibhloko esemgangathweni iyafuneka ukulinganisa i-durometer ngaphambi komlinganiso. Iziphumo zokulungiswa komvavanyi wobulukhuni beRockwell, umahluko uphakathi ± 1 Ukuba umahluko uphakathi ± 2, ixabiso eliqingqiweyo lingafunyanwa.Umahluko ungaphandle komgangatho ± 2, umvavanyi wobulukhuni kufuneka alungiswe, alungiswe okanye ithatyathelwe indawo yenye indlela yokuvavanya ubulukhuni.
Isikali ngasinye sokuqina kwe-rockwell sinoluhlu lwesicelo esisebenzayo kwaye kufuneka sikhethwe ngokuchanekileyo ngokwemigaqo. Umzekelo, xa ubunzima buphezulu kune-HRB100, isikali se-HRC kufuneka sisetyenziselwe ukuvavanywa; Xa ubunzima buphantsi kune-HRC20, isikali se-HRB kufuneka sisetyenziselwe ukuvavanywa. Ngenxa yokuba ngaphaya kovavanyo oluchaziweyo, ubunzima bokuchaneka kwemitha kunye nobuntununtunu buhlwempuzekile, ixabiso lobulukhuni alichanekanga, alifanelanga ukusetyenziswa. Ezinye iindlela zokuqina kobunzima nazo zinemigangatho yokulinganisa ehambelanayo.Iibhloko eziqhelekileyo zokulinganisa i-durometers azinakusetyenziswa kumacala omabini kuba ubunzima becala eliqhelekileyo kunye necala elingasemva alinakufana. Ngokubanzi, ibhloko esemgangathweni iya kusebenza kwisithuba sonyaka omnye ukusukela kumhla wokulinganiswa.
2. ekubuyiseleni intloko okanye isikhonkwane, nikela ingqalelo kumalungu oqhagamshelo ukuze usule ucoceke. Emva kokutshintshwa, isampuli yentsimbi kufuneka kuvavanywe amatyeli aliqela ngobulukhuni obuthile kude kube lixabiso lobulukhuni ngokufanayo amaxesha amabini alandelelanayo Injongo kukwenza ukuba uxinzelelo lwentloko okanye i-anvil kunye nenxalenye yoqhakamshelwano yomatshini wokuvavanya, unxibelelane kakuhle, ukuze ungachaphazeli ukuchaneka kweziphumo zovavanyo.
3. Emva kovavanyo lobulukhuni buhlengahlengisiwe, indawo yokuqala yovavanyo ayisetyenziswanga xa ubunzima bulinganiswa.Ngenxa yokoyika isampulu kunye noqhakamshelwano lwe-anvil akulunganga, ixabiso elilinganisiweyo alichanekanga. umvavanyi usebenza ngesiqhelo, isampulu iya kuvavanywa ngokusesikweni kwaye ixabiso lokulinganisa liza kurekhodwa.
4. Xa isampuli ivunyelwe, ubuncinci amaxabiso obulukhuni amathathu akhethwe ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo ukuba zivavanywe, kwaye ixabiso eliphakathi lithathwa njengexabiso lobulukhuni besampuli.
5. Kwiimodeli ezinemilo entsonkothileyo, iphedi yemilo ehambelana nayo kufuneka yamkelwe kwaye ilungiswe ngaphambi kovavanyo.Isampuli yesetyhula ivavanywa ngokubanzi kumjelo omise okwe-V.
6. Phambi kokulayisha, jonga ukuba ngaba isiphatho sokulayisha sibekwe kwindawo yokothula umthwalo. Ngexesha lokulayisha, isenzo kufuneka sibe lula kwaye sizinze, singabi nzima kakhulu. Emva kokulayisha, isiphatho sokulayisha kufuneka sibekwe kwindawo yokothula umthwalo, ukwenzela ukuthintela ukujika kweplastiki okunokuchaphazela umlinganiso wokuchaneka ngenxa yesixhobo esiphantsi komthwalo xesha elide.
Egqithileyo Ukufunda ngokuthe ngqo kweBrinell Hardness Tester HBS-3000
Okulandelayo: I-Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5